သတင်း - ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်၏ Longitudinal Welded Pipe Unit သည်ဘာလဲ။
Longitudinal ဂဟေဆော်စက်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်သည်ရိုးရှင်း။ ထုတ်လုပ်မှုမြင့်မားမှု၊ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာပြီးလျင်မြန်စွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သည်။ ပိုက်သွယ်ထားသောပိုက်၏အားသာချက်သည်ယေဘုယျအားဖြင့်ဖြောင့်တန်းသော welded ပိုက်ထက်ပိုမြင့်သည်၊ ပိုက်ကိုပိုကျဉ်းသောအချင်းဖြင့် welded ပိုက်ထုတ်လုပ်ရန်သုံးနိုင်သည် သို့သော်ဖြောင့်ပိုက်၏တူညီသောအရှည်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ဂဟေဆော်အရှည်သည် ၃၀ မှ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်လာပြီးထုတ်လုပ်မှုနှုန်းမှာနိမ့်သည်။
ထို့ကြောင့်ဖြောင့်တန်းသော welded ပိုက်အသုံးပြုမှု၏အချင်းသေးငယ်သောအချင်း၊ အချင်းကြီးမားသော welded ပိုက်ကိုအများအားဖြင့်သုံးပြီးဂဟေဆော်သည်။
အနက်ရောင်ပြွန်ဟုလူသိများသောယေဘူယျအားဖြင့် welded pipe ဟုလူသိများသော ၁. ဖိအားနည်းအရည်ပေးပို့ထားသောသံမဏိပိုက် (GB / T3092-1993) ရေ၊ ဓာတ်ငွေ့၊ လေ၊ ဆီနှင့်အပူငွေ့များနှင့်အခြားယေဘူယျအားဖြင့်ဖိအားနည်းအရည်များနှင့်သံမဏိပိုက်များအသုံးပြုခြင်းကိုအသုံးပြုသည်။ ပိုက်နံရံအထူကိုသာမန်သံမဏိနှင့်အထူသံမဏိပိုက်များအဖြစ်ခွဲခြားထားသည်။ ပုံစံကို ယူ၍ မရသောပိုက် (အလင်းပိုက်) နှင့်သံတိုင်နှင့်ပိုင်းသည်။ အမည်ခံအချင်း (mm) ပါသံမဏိပိုက်သတ်မှတ်ချက်များသည်အမည်ခံအချင်းသည်ခန့်မှန်းခြေအချင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။ အများအားဖြင့်ဓလေ့ထုံးတမ်းစဉ်လာတွင်သုံးသောအရည်ဖိအားတိုက်ရိုက်ပေးပို့သောသံမဏိပိုက်ကိုအရည်တိုက်ရိုက်ပေးပို့ခြင်းအပြင် galvanized welded pipe အတွက်သုံးသော low-pressure fluid transmission pipe ကိုသုံးသည်ဟုဆိုသည်။
2. အဖြူရောင်ပိုက်ဟုလူသိများသောသွပ်ရည်စိမ်ထားသောသံမဏိပိုက်ဟုလူသိများသော ၂. ဖိအားနည်းအရည်များသွပ်ရည်စိမ်ထားသောသံမဏိပိုက် (GB / T3091-1993) ရေ၊ ဓာတ်ငွေ့၊ လေဆီနှင့်အပူငွေ့၊ နွေးထွေးသောရေနှင့်အခြားယေဘူယျအားဖြင့်ဖိအားနည်းအရည်များ (သို့) ပူနွေးသောသွပ်ရည်စိမ်ထားသောဂဟေဆော်ခြင်း (ဂဟေဆော်ခြင်းသို့မဟုတ်ဂဟေဆော်ခြင်း) ပိုက်ကိုအသုံးပြုသည်။ ပိုက်နံရံအထူကိုသာမန်သွပ်ရည်စိမ်သံမဏိပိုက်နှင့်အထူသွပ်ရည်စိမ်သံမဏိပိုက်များအဖြစ်ခွဲခြားထားသည်။ ပုံစံကို ယူ၍ non-threaded galvanized steel pipe နှင့် threaded galvanized steel pipe သို့ခွဲခြားသည်။ အမည်ခံအချင်း (mm) ပါသံမဏိပိုက်သတ်မှတ်ချက်များသည်အမည်ခံအချင်းသည်ခန့်မှန်းခြေအချင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။ ၁၁/၂ ကဲ့သို့သောလက်မများတွင်သုံးလေ့ရှိသည်။
၃။ သာမန်ကာဗွန်သံမဏိဝါယာကြိုးစွပ် (GB3640-88) သည်စက်မှုနှင့်မြို့ပြအဆောက်အ ဦး များ၊ သံမဏိပိုက်များကာကွယ်မှုအတွက်စက်ယန္တရားများနှင့်အခြားလျှပ်စစ်တပ်ဆင်မှုစီမံကိန်းများဖြစ်သည်။
၄။ ဖြောင့်သောချုပ်ရိုး welded steel pipe (YB242-63) သည် longitudinal weld pipe နှင့် steel pipe ဖြစ်သည်။ အများအားဖြင့်မက်ထရစ်ဂဟေဆော်သံမဏိပိုက်၊ ပါးလွှာသောနံရံများပြွန်များ၊ ထရန်စဖော်မာများ၊ အအေးပေးပိုက်များစသည်ဖြင့်ခွဲခြားထားသည်။
၅။ ဖိအားအရည်ဖြန့်ဝေပေးသည့်အမြှုပ် arc arc welded pipe (SY5036-83) သည်အပူပေးသောသံမဏိအမြှောင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးအခန်းအပူချိန်၌လိမ်ထားသောပုံသဏ္atန်ရှိအပူပေးသောဂဟေပုံစံ၊ သံမဏိပိုက်။ ခိုင်မာသောဖိအားသံမဏိ၊ ဂဟေဆော်ခြင်း၊ တင်းကျပ်သောသိပ္ပံနည်းကျစစ်ဆေးခြင်းနှင့်စမ်းသပ်ခြင်းအမျိုးမျိုးပြုလုပ်ပြီးနောက်လုံခြုံစိတ်ချရပြီးစိတ်ချရသောအသုံးပြုမှု။ ကြီးမားသောလုံးပတ်သံမဏိပိုက်သည်မြင့်မားသောထိရောက်မှုကိုသယ်ဆောင်ပေးပြီးပိုက်လိုင်းရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများကိုချွေတာနိုင်သည်။ အဓိကအားဖြင့်ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းများကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရာတွင်သုံးသည်။
၆။ ဖိအားအရည်ဖြန့်ဖြူးထားသောဂဟေဆော်ထားသောကြိမ်နှုန်းမြင့်သံမဏိပိုက် (SY5038-83) သည်ပြွန်အလွတ်အတွက်အပူပေးသောသံမဏိအမြှောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ welded သံမဏိပိုက်။ ခိုင်ခံ့သောဖိအားသံမဏိ၊ ပလပ်စတစ်နှင့်လွယ်ကူသောဂဟေဆော်ခြင်းနှင့်ပုံသွင်းခြင်း၊ ခိုင်မာသော၊ သိပ္ပံနည်းကျစမ်းသပ်မှုများနှင့်စမ်းသပ်မှုမျိုးစုံပြုလုပ်ပြီးနောက်လုံခြုံစိတ်ချရသောစိတ်ချရသောသံမဏိပိုက်လုံးများအသုံးပြုခြင်း၊ မြင့်မားသောထုတ်လွှင့်မှုထိရောက်မှုနှင့်ပိုက်လိုင်းရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများတင်ခြင်းတို့ကိုသက်သာစေနိုင်သည်။ အဓိကအားဖြင့်ရေနံပိုက်လိုင်း၊ ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်သုံးသည်။